I-China 2100KG, i-2500KG yokuTsala uMkhosi weKhonkrithi yeMagnetic Concrete yeFomwork yentsimbi okanye i-Plywood Mold yokulungisa abavelisi kunye nabathengisi | Meiko Magnetics
2100KG Precast eziphathekayo Magnet luhlobo lomgangatho wamandla oqhelekileyo kwiimagnethi zokuvala, ekucetyiswa kakhulu ukuba zisetyenziselwe ukulungisa i-sidemould kwiiphaneli zesandwich zekhonkrithi. Inokulingana kakuhle kwifomwork yentsimbi okanye ifomathi yamaplanga ngamaplanga, kunye neeadaptha ezahlukeneyo. Umzobo obonisiweyo ludityaniso oludibanisa ngomthi okanye ngeplanga esecaleni-isikhunta.
Emva kokucofa iqhosha, iimagnethi zebhokisi zibambe itafile ngokuqinileyo. Kulula ukukhonkxa isitya sensimbi kwipleyiti yomthi ngezikhonkwane ezinokuthi zenziwe ngokucinezela nje iqhosha ngesandla okanye ngonyawo. Ukuzicima ukuba zisebenze, iimagnethi zikhutshwa ngokulula sisixhobo sentsimbi (ukutsala iqhosha). Kwimeko yokungasebenzi, iimagnethi ezivaliweyo zinokususwa ngokulula kwifom yetafile. Iimagnethi zangaphambi kwesamente zinokusetyenziswa zodwa okanye zidityaniswe neadpator ukulungisa ifom. Ngokwesiqhelo ibhokisi yemagnethi yamandla angama-2100Kg ifanelekile ngokugqibeleleyo kwimveliso yodonga lobukhulu obungama-60-90mm. Kwakhona, siyakwazi ukuzikhusela ezinye iimagnethi zebhokisi yamandla, njenge2500KG, 3000KG yohlobo njengeemfuno zakho.
Egqithileyo I-1800KG yokuValwa kweMagnethi nge-On / Off Button yeNkqubo yeFom yoKwakha esekwe ngaphambili
Okulandelayo: Iimagnethi zediski yeNeodymium, iMagnethi ejikeleze iN42, iN52 yeZicelo ze-Elektroniki
Neodymium Magnet engaqhelekanga kunye Black Epxoy Coa ...